Qaybtii labaad Jabintii Cabdilaahi Askar Allaa yarxama. . | Somaliland Hargeisa City
Qaybtii labaad Jabintii Cabdilaahi Askar Allaa yarxama. .
12 January, 2017 — somaliland1991
Qaybtii labaad Jabintii Cabdilaahi Askar Allaa yarxama.
Ku sinaan 6-dii subaxnimo ayay dhaqajiyeen Xarshina waxay galeen waqti yar ka dib, waa bishii april 12-kedi 1983. xaruntii SNM-ta ee Xarshimeed ayay meydkii ku rogeen sidaasa laguna aasay iyana sidaasay Ethiopia ku galeen.
Magacyada Mujaahidiintii Hawlgalkan fuliyay:-
1. Ibrahim Ismail maxamed Koodbuur
2. Cabdi salaan turki
3. Biixi xaaji xasan
4. Siciid Cabdi yaasin (Siciid-Birjeex)
6. Axmed xuseen warsame(Maloosh)
7. adan Maal Caqli
8. Saleeban Siciid
9. Jaamac maxamed cali
10. Maxamed Carab
11. Axmed Ismaciil Yuusuf.
Dadka Cabdilaahi Askar ku dhowdhowi waxay sheegaan in nabaradii maalintaa lagu dhuftay Cabdilaahi ay wali ka muuqdaan Jidhkiisa, sidaa aan kasoo xigtay Mujaahid CALI FALAAX, oo hada dagan wadanka UK.
Markii uu soo baxay ayaan is hor taagay Aniga oo kasoo jeestay xaggii daaqadaha, waxa aan ku idhi Waar Baabuurka fuul.. Waar baabuurka fuul. Anigii ayuu iga shakiyay, Ibraahim iyo Cabdisalaan oo uu soo dhaafay ayuu ku yidhi Waar ma Baabuurka ayaan fuulaa , Ibraahim ayaa la hadli waayay markasaan Ibrahim ku idhi “Waar Baabuurka fuul dheh”, Ibrahim ayaa u ishaaray inuu Baabuurka fuulo, xaggii Baabuurka ayuu u laabtay oo dhinicii Dirwalka ayuu soo maray. Dhinaca kale mar oo ka soo gal ayaan ku idhi, Ibraahina Baabuurkii ayuu la fuulay Shidhkii. Siciid Cabdi Yaasiin oo Baabuurka wadayna ma ahayn inuu ka dago, balse inuu saarnado ayay ahayd. Aniga iyo Cabdisalaan Turki ayaa ku dhaqaaqnay Biixi Xaaji Xasan oo dhaawacnaa. Siciid oo isna dhaawac ahaa, xabbadu waxay ku dhacday isagoo Baabuurka saaran oo kalama uu soo degin.
dhawr goor ayaa degdega awgii baabuurku naga dhaqaaqay oo hadana noo joogsaday oo hadana dhaqaqay. Baabuurku in door ah ayuu naga goay oo Albaabkii laga baxayay ayuu ku dhawaaday, Annaguna dhaawicii Biixi ayaanu daba sidnay. hadadna wuu dhaqaaq oo noo joogsaday. Biixi Xaaji Xasan aad ayuu u dhawacnaa oo naftuba waa ay kasii gurmaysay. Waxa uu nagu yidhi “Waar Annigu dhintayee yaan Baabuurku idinka tegin”.sidaa ayaanu Baabuurkii ku fuulnay, Biixina markii aanu tagnay naftuba way ka baxday oo nolol laguma soo gaadhin.
Sidaa ayaanu ku ambabaxnay Annagoo Baabuur keliya wadana. Albaabka Galbeed ayaanu ka baxnay. Jidka bari ka mara Guriga uu Cabdilaahi Dirwal iminka ku jiro ayaanu qaadnay, waxa aanu u joogsanay Saddexdii Baabuurka kale saarnaa oo soo ordayay. Cidi nama eryanayso markaa wax naga sii yaacaya mooyaane Dugsigii 1st July oo iminka ah Jaamacadda Hargeysa ayaanu Bari ka marnay. Masaajidka Isha Boorama ku yaala, galbeed ayaanu ka marnay, Magaalo qaloocan oo ahayd Xeradii Ayaxa ayaanu marnay. Midig ayaanu u baydhnay oo Dalcadda Kalajarka dariiqa ka booda ayaanu marnay. Markii aanu ka baxnay Dalcadii kalajarka ayaa Baabuurkii naga hashkadeeyey oo joogsaday. Waxa naga horaysay Xero Ciidan degenyahay iyo Gantaalihii. labada dhexdooda ayaanu marnay, Cadceedu markaa way sii dhacaysaa, Waxay nala noqotay inaanu ciidankaa Cadceeda hoosta ka marno, waayo haddii aanu Cadceeda kasoo baxa ka mari lahayn way na ogaan lahaayeen. Xagga cadceeda inaanu kamarnaa anaga ayay na caawisay. Xeradii markii aanu dhaafnay ayaanu bidixda u baydhnay.
Markale ayaa Baabuurkii hashkadii bilaabay, Annagoo socona halka ay ku kala baydhaan wadada Madaarka tagta iyo ta Ina Naxar usoo leexata. Kucladdii ayaanu in shidaal ah ku shubnay waa uu noo dhaqaaqay, markii ilaa boqol talaabo soconay ayuu haddana joogsaday. Tallo ayaanu markale is weydiinay intii aanu tashanaynay ayay cadceeddii halkaa noogu dhacday. Cabdisalaan Turki ayaa soo jeediyay inaanu Salatul-Shukri tukano, waananu tukanay.”Markii ay tukadeen ayay baabuurki yara hagaajisteen oo dhaqaajiyeen. Waxay qoorsadeen wadadii Habaas weyn. Darfacle markii ay dhaafeen ayay laydhka shiteen. Makhaayad ku taala Tuulo la yidhaa Cunaaye ayay joogsadeen, Dadkii ayay waraysteen inay wadadu kala baydhayso inta Gumburaha banka ka horaysa iyo inkale. Waxa loo sheEgay inay kala baxayso. Meesha oo kayn ahayd awgeed dadkii ayay weydiisteen in cid la raaciyo, dad aqoon u leh Jidka. Laba nin ayaa lagu daray iyadoo loo qaatay inay yihiin Jaadlayaal.
Labadii nin waxay ku simeen Gumbiriihi Banka, halkiina nin kale oo dal mariye ah ayay ka qaateen, Waxay cagta saareen Wadadii Gumar u baxaysay. Meel fog ayaa waxa uga muuqday Leydh horgoynayay oo ka soo baxay Bali Gubadle oo xaga Gumbureed u socda. Markii dambe ee ay talaabeen waxay ogaadeen in laydhii hor goynayay ahaa BeeBee ciidamadu lahaayen oo iyaga loo soo diray. Waxa intaa lagu daray in Baabuurkaa Beebeega ahaa uu la booday ciidankii uu siday mar uu xurfad ku dhacay oo nina uu geed kasoo laad laadsamay nina dhulka ku dhacay oo luqunta wax ka noqday. Intii ay shilka ku hawlanaayen ayay iyaguna xuduuda ka talaabeen. sidaa ayay Gumar ku tageen, Gumar waxa ay kala kulmeen Ciidankii oo halkaa ku joojiyay Ibrahim Koodbuur baa ku yidhi “Waxanu nahay Koofiyad castii qaybta ee wax Baabuur ahi ma idin dhaafeen.. Baabuur ayaa lanagala soo baxsadee..?”, Maya ayay ugu jawaabeen Askartii, Ibrahim koodbuur waxa uu faray Askartii inay wixii Baabuur ah ee ay arkaan ay joojiyaan. Waxa uu intaa u gu daray inay Xaga Bali Cabane u dhaafayaan.
Ibrahim kood buur sidii ayuu u labisnaa. Intii aanay gumar ka tagin waxay sii waraysten inay wadadii caraancaray miinaysantahay iyo inkale waxa loo shegay inaanay miinaysnayn, sidii ayay ku dhaqajiyeen markii ay gumar in yar ka socdeen ayay u baydheen wado yar oo la yidhaa Wada tuug oo xarshin ku beeganta, caraancarayna xaga galbeed ka marta. Idhinka xarshimeed markii ay u baxeen ee ay laamayarada marayeen ayay siciid oo dhawac ahaa oo baabuurka saarnaa yidhi Waar biyo I siiya kol haddii aynu soo talownay reer Banka agtiisa yaalay ayaanu joogsanay oo biyo weydiisanay. Waqti ayay ku qaadatay intii biyaha loo keenayay sidii loo tooyanayay.
Biyihii ayay siiyeen Siciid nimankii ayaa u sheegay in kol haddii gabalku dhaco aan xarshin la geli Karin, gaar ahaan iyagoo hubsitay Baaburna watay. Sidii ayay yeeleen saacadu markay ahayd 2:45a.m saacadod ayay siciid naftii ka baxday. Subaxnimadii ayay goor hore tooseen iyadoo uu Maydkii gaadhiga u saaran yahay ayay damceen inay dhaqaaqaan, baabuurkii ayaa kiciwaayay qafaska ayay ka qaadeen waxayna arkeen inay xabbadi kaga dhacday qasabadii baabuurka halkii xabadu kaga dhacday ayay qasabadii warqad ku duubeen, Beytariga qudhiisu waa uu ka yara seexday, waa ay riixen inyar ka dibna waa uu istaadhmay.
Ku sinaan 6-dii subaxnimo ayay dhaqajiyeen Xarshina waxay galeen waqti yar ka dib, waa bishii april 12-kedi 1983. xaruntii SNM-ta ee Xarshimeed ayay meydkii ku rogeen sidaasa laguna aasay iyana sidaasay Ethiopia ku galeen
Uducee intii kudhimatay Howlgankan iyo dhamaan dibu xorayntii slnd. Aamin
« UAE presence expands in Africa
Heshiis kale oo waxtar dhaqaale iyo mid siyaasadeedba u leh Somaliland, kaasi oo Imaaraadka carabtu kaga furanayo magaaladda Berbera saldhig milatari. »